Lo Mveliso ungaphantsi komhlaba ubaluleke kakhulu kwiNwele ethambileyo, eseMpilweni
Ngangoko singathanda ukulungelelanisa indlela yethu yokucheba iinwele kunye nobutyebi obufunyenwe ekhitshini njengefolokhwe (Uxolo, iAriyeli), ukuthenga ibhrashi yeenwele efanelekileyo ukuze ilungele uhlobo lweenwele zakho, ubume, ubude, kunye nokukhethwa kwesitayile kude kube lula. Ibrashi oyisebenzisayo ukuphazamisa iisarha okanye ukuhambisa ...
Ezona Bhrashi ziBalaseleyo zeNwele zoKwenza iMane yakho
Wonke umntu ufuna ibrashi yeenwele elungileyo. Nokuba kukufumana amaqhina okanye ukunika iinwele zakho ubume obongezelelekileyo, sisixhobo esiguqukayo esibalulekileyo ekujongeni eyona ilungileyo. Ewe, ukuba uzingela entsha, uya kufuna ukuqinisekisa ukuba uyifumana yenziwe kakuhle kwaye uza kuyenza ...
Ezi zi-6 zeenwele zeengcali ziya kuthi * zongeze ivolumu kunye nobukhulu kwizinwele zakho
Nokuba ufuna ukulingisa i-Siouies bouffant, amp ante kuhlaziyo lweklasikhi okanye ngokulula wenze intshukumo ebuthelezi kubude bonke, iinwele ezinamandla aziphumi ngaphandle kwesitayile. Kodwa ukuba uzalwe unenwele entle, okanye iinwele zakho ziye zacutheka kule minyaka idlulileyo, ufezekisa umthamo ...